Zvinoshamisa zvinhu zvakaitwa nechirongwa cheBlender | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Graphics, Zvirongwa, Free Software
Blender ndeimwe yemahara emahara uye akavhurika sosi mapurojekiti kunze uko. Chishandiso chine simba kwazvo chevagadziri icho chine zvishoma zvekuchiva kune mamwe akawanda mapurogiramu akabhadharwa. Neichi chishandiso, mamwe mafirimu uye mamwe anozivikanwa e3D maficha akatogadzirwa.
Haisi chishandiso chakareruka, asi nekuzvipira kushoma uye nesimba zvinogona kunzwisiswa uye kugona kuitira kuti upe zvisikwa zvako zvemberi kune nyika yehupenyu. Uye saka iwe unogona kuona kuti inogona kunyatso kuve nyanzvi, heino runyorwa na mamwe mabasa anozivikanwa izvo zvakagadzirwa neBlender ...
Kukwidziridza vhidhiyo yeBMW 3: Mike Pan akateedzera uye akapa iyi BMW vhidhiyo kuti agadzire iyi shambadziro pfungwa achishandisa Blender 2.5. Uye kwete, mota yaunoona haisi yechokwadi ...
Kajimba- MuSydney, Red Cartel (Promotion Studios) zvakare yakashandisa Blender kugadzira iyi oopikicha yevakuru mutambo wemafirimu chirongwa.
kushanduka- Iri basa rakaitwa muBlender rakakunda iyo 2009 Suzanne Awards ye Best Dhizaini. Musiki waro ndiAlex Glawion, uyo ava nemubairo uyu.
Bounce to Space: Ichi chimwe chisikwa chinoshandisa Blender chakasarudzwawo kune iwo mubairo mumwe chete. Mune ino kesi muimbi aive Pablo Vázquez.
Kupisa: David Ward akashandisawo Blender kune ichi chimwe chisikwa chinonakidza chakavakirwa Pstrong's Cars.
Purojekiti London: Benny's Fuel uye Kugadzirisa: Kunze kwekumwe kusarudzwa uye vanokunda maSuzanne Awards, isu tine mamwe akawanda mabasa anonakidza senge aya achishandisa mhedzisiro yeVFX.
Edzai LabKukunda iyo Suzanne Awards yeYakanakisisa Mhuka pfupi ya2010, iwe unayo iri rimwe basa rinoseka rakagadzirwa naChris Burton.
Akafa cyborg: iri zita remutambo wevhidhiyo, mune ino kesi inoshandisa iyo Blender Injini kune iwo ma graph aunoona.
Inotevera Gen- Iyo yekuratidzira naTangent Mhuka uye Netflix zvakare inoshandiswa naBlender.
Mumiriri 327: basa iro zvakare rakakosha chaizvo iro rinokoshesa ruzivo rwakakura uye rwakavakirwa pamabasa akadai seMission Impossible, James Bond, Bourne, The Incredibles, nezvimwe.
chitubu: iyo bhaisikopo rakavhurika rakagadzirwa neBlender uye izvo zvinokutendera iwe kuti uone izvo chishandiso ichi chingaite.
Iwe uchiri kufunga kuti zvishandiso zve open sosi uye yemahara hazvina maturo here? Zvakanaka, iwe uchaodzwa mwoyo zvikuru kana iwe uchifunga izvo, seSolarWinds yatora iyo ... (ndinotora mukana wekuisa iyo pullita)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Zvinoshamisa zvinhu zvakaitwa nechirongwa cheBlender
Blender inoshamisa, ndanga ndichiishandisa kweanopfuura makore gumi nemashanu uye ndinofara nazvo. Ini ndinotochida zvakanyanya kupfuura Maya, inova ndiyo yandinofanira kushandisa mune mamwe mapurojekiti ezve kungoshanda uye zvikonzero zvekuenderana, asi pese pandinogona kusarudza zviri pachena kwandiri «BLENDER»
Izvo zvaidikanwa kutaura izvi